Yintoni iNdlu yoVuselelo lwamaKoloniyali? -Iinyani malunga neKhaya leNdlela yokuHlaziya amaKhaya - Izitayile Zendlu Ezaziwa Kakhulu Emelika
Yintoni iNdlu yoVuselelo lwamaKoloniyali? -Iinyani malunga neKhaya leNdlela yokuHlaziya amaKhaya
Ukuvuselelwa kobukoloniyali yenye yezona ndawo zixhaphakileyo nezaziwayo kwindawo yokuhlala yaseMelika kwimbali yaseMelika. Singa Khuphela imvelaphi yayo emva kwi-1876 , xa ilizwe labhiyozela ikhulu leminyaka, likhuthaza (abanye) baseMelika ukuba bajonge ngothando kunye nothando emva kwexesha lobukoloniyali. Ngelixa ukwenziwa kwamathanga (kunye nobukhoboka obuhlala buqhubeka) yi ixesha elimnyama kwixesha lethu elidlulileyo, iMelika yakuqala imelwe ixesha elihle kwinzala yabo benza ikholoni. Umbono ka ' ngokwesiko laseMelika values ​​'zavakala ngexesha eliphawulwe kukungazinzi kwezentlalo ngenxa yasemva kweMfazwe yamakhaya, ukuvela kwemizi-mveliso eqhuba uqoqosho, kunye nokuthontelana kwabafuduki abavela eYurophu enengxaki. Ngeenjongo zokwakha, oku kwakuthetha ukuvuseleleka kolwakhiwo lobukoloniyali kule minyaka ingamashumi izayo.
Njengoko sisazi, uyilo lokuqala lobukoloniyali lubandakanya izitayile zendlu yaziswa yi-Bhritane , AbaFrentshi, iSpanish, kunye nabahlali baseDatshi ekuqaleni kweMelika. Ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800, izindlu zaseVictorian, zase-Italiya nezaseGrisi zazisele zixhaphakile, zazinkulu kwaye zihonjisiwe kunangaphambili kwabo babengamakholoniyali — kwaye ukuduma kwabo ngokuqinisekileyo kwaba nefuthe kwindlela eyaqala ngayo Imvuselelo yamaKoloni.
Umbutho woVuselelo lwamaKoloniyali uye wazuza amandla kwilizwe liphela ngenkulungwane kwaye ubusaziwa kakhulu ngeminyaka yoo-1940, ukhuthazwe yinkqubela phambili yokufota nokuprinta… [nto leyo] eyenze ukuba intabalala yobukho bobukoloniyali ifumaneke kuluntu lonke, utshilo u-Andrew Cogar. , umakhi kunye nomongameli Iingcamango zembali Ifemu yokwakha esekwe eAtlanta naseNew York egxile kumakhaya emveli esiqhelo, uninzi lwabo luhlala luphenjelelwa bubume bobuKoloniyali kunye nemvuselelo yayo.
Yintoni Echaza Amakhaya Okuvuselela Amakoloni:
Ke amakhaya oVuselelo lwamaKoloni akhangeleka njani? Kuninzi njengabo bangaphambili, kodwa bakhulu kwaye banomdla. Ukuba ukhe waqhuba ngakwindawo enamakhaya amadala asusela kwiminyaka yee-20s neyee-30s, ngokungathandabuzekiyo uninzi lwendlela ethile yendlela yokuVuselelwa kwamaKoloniyali.
Amakhaya ayeyindibaniselwano yezitayile zangaphambili zekoloniyali, utshilo uCogar, enezinto ezivela kwizitayile zoyilo lobukoloniyali (ubukhulu becala zaseBritane kunye nezaseDatshi), kodwa zachukunyiswa kungekuphela nje amakhaya exesha laseVictorian elihombise kakhulu elalisandulela le meko kodwa Inkqubela phambili yale mihla evumela ukuba uguquko olongezelelekileyo lunganikwa ookhokho bethu abathandayo. Oku kwenza ukuba abakhi bezakhiwo kunye nabakhi bamakhaya kwii-1900s zokuqala bathabathe uyilo lwesizukulwana esidlulileyo kwaye baphinde babuyele kwimeko yabo yangoku yenkcubeko kunye netekhnoloji, ukuyibuyisela ngokufanelekileyo kwiimfuno zabo kwangoko, utshilo uCogar.
Uphahla lwe-gabled esecaleni (enye apho indawo engunxantathu yophahla ikumacala endlu; ujonge kumnyango wangaphambili ubona i-shingles) yayiyeyona ndlela ithandwayo yophahla, kodwa uphahla olunjenge-barn-gambrel uphahla olunezidumbu (ubukhulu becala Ukuvuselelwa kweDatshi yamaKoloniyali) kunye nophahla lwenyonga (apho onke amacala omane ethambeka lophahla aye ngasezindongeni) nawo ayesetyenziswa ngokuxhaphakileyo.
Ukubumba ecaleni kweendonga zangaphandle ezingaphezulu (ezaziwa njengee-cornices) kunye ne-overhangs eqikelelwe eluphahleni zazinokuhonjiswa ngakumbi kwaye zinkulu, amanqaku eCogar, kunye neefestile zikwazile ukwenza iintlobo ezahlukeneyo: iiprojekti zebay windows, iifestile ezimbini, kunye neewindows ezintathu ezingazange esetyenziswe kwizimbo zokuqala zekoloniyali zabonwa kwimvuselelo, utsho. Ukusukela ukuba iikhikhini zala maxesha zenkulungwane yama-20 zibandakanya izitovu kwaye nokubekwa kwazo kwakungaxhomekekanga kuzo eziko , iitshimini zinokuhanjiswa ziye kwiindonga ezingaphandle. Uninzi lwezindlu zimbini okanye ezimbini ezinesiqingatha zamabali amade, kwaye iingcango zangaphambili ziqhayisa ngokubonakala okuhle kunangaphambili, kunye neentsika kunye neentsika ezigxininisa ukungena.
Ngaba Imvuselelo Ivuselelwe?
Nangona sisithi intshukumo yokuvuselelwa kwamakholoni yaphela ngeMfazwe yesibini (II), amakhaya awazange ayeke ukwakhiwa ngohlobo (hello, subdivisions of suburban America), nangona izikhombisi zembali bezingacacanga kwaye ezinye izitayile kunye neendlela ziye zanda ekuthandeni.
KwiCogar, nangona kunjalo, ukubaluleka kwesi sitayile sokwakha ngu imvelaphi yayo engokwembali. Ngokungafaniyo nezinye izitayile zoyilo ezaziphendula ngokuthe ngqo kwimeko-bume yendawo kunye nezithethe zokwakha, uthi, isitayile sokuVuselelwa kwamaKoloniyali yayisisicelo senjongo yophando lwezifundo ukwenza isitayile sikazwelonke kusetyenziswa isimbo esidala esisetyenziswe kwimeko yenkcubeko entsha. Njengaye nawuphi na umntwana olungileyo obuyayo, intshukumo yokuvuselela ubuKoloniyali ithathe okona kulungileyo ngaphambi kwayo kwaye watshata ukuba ngesimbo sangoku kunye nendlela yokuphila yale mihla yokwenza into entsha, kodwa oko kugcina intsingiselo yeentsuku ezintle ze-ole.
UMaggie Burch Umbhali oNikela UMaggie ubhala malunga nezinto zangaphakathi, izindlu nomhlaba kunye noyilo lweNdlu entle.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
umngxungxungxungxungxungxuphongongweni wokulala wehalloween
Kanye idilesi yendlu yasentshona
yeyiphi imibala ehamba nelilac
ukhathalelo lwezityalo zomthi wemali